1,500 Okuthunyelwe! Iya Ekubuseni Komphakathi! | Martech Zone
NgoMsombuluko, Okthoba 6, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Bengisebenzisa i- I-Archive ye-Inthanethi Umshini Wokubuya kulobubusuku ukuzama ukukhomba lapho ngi ngokusemthethweni waqala ukubhuloga. Ngangiyi-bloomer sekwephuzile uma ngiqhathaniswa nalabo ababhulogi abaqala ukubhuloga ngenkathi kusabizwa i-magazine.
Ukubhuloga kwami ​​kokuqala kwenzeka ngomhla ka- URyze neqembu le-Newspaper Database Marketing (anginasiqiniseko sokuthi ngabe uRyze ubekade ethuthukisiwe kusukela ngo-2005!). Ngibe sengidlulela ku Blogger futhi waqala ukubhala Ukuqhuma kukaDoug.
The okuthunyelwe kokuqala kwebhulogi kubhulogi lami le-WordPress eliphethwe kwakumayelana nokuzikhangisa kweMountain Dew njengokuzilanda kwami ​​kwasekuseni. Lowo mkhangiso kufanele ukhuthaze noma ngubani ukuthi aqale ibhulogi!
Njengoba ngibheka emuva kubantu abebelokhu bebhloga kahle phezu a iminyaka eyishumi, kuyamangaza ukuthi ngithole izibalo enginazo kuleli sayithi esikhathini esifushane sokuphila kwazo:
Martech Zone ibihlala njalo kumabhulogi aphezulu ayi-5,000 ku Technorati.
Martech Zone kwakungaphakathi Amandla 150 Wokumaketha Amabhulogi kuwebhu.
Martech Zone iyaqhubeka nokuba kumasayithi aphezulu we-100,000 nge-Alexa ngayinye.
Bangaphezu kuka-400,000 abantu abavakashele ibhulogi yami.
Ngaphezu kwezivakashi zami ezintsha ezingama-40% zifika lapha zisuka -Google.
Ngizoqhubeka ngifundise abantu ukuthi basebenzise kanjani i-automate, bahlanganise, futhi bathole okuningi kubuchwepheshe babo bokumaketha ngomzamo omncane.
Tags: Ukuqhuma kuka-dougmangaki amaposi ebhulogikuthonya nokuzenzekelayoukubuswa kwezokuxhumanaumshini we-wayback